Gareth Bale ayay u furan tahay inuu ku laabto Premier League – laakiin sida uu sheegay Real Madrid ayaa hortaagan bixitaankiisa.
Xiddiga reer Wales, oo 31 jir ah, ayaa qarka u fuulay inuu u dhaqaaqo Shiinaha xagaagii hore ka hor inta Real aysan ka bixin heshiiska daqiiqadihii ugu dambeyay.
Waxaa qandaraaskiisa ka hadhay laba sanno, laakiin Bale ayaa noqday mid ku caajisay kursiga kaydka ee kooxda uu maamulo Zinedine Zidane.
Isaga oo la hadlaya Sky Sport, Bale ayaa yidhi: “Haddii fursad aan ku baxo lay siin lahaa waa wax aan eegi lahaa.
“Waxaan isku dayay inaan baxo sannadkii la soo dhaafay laakiin heshiiskii way joojiyeen daqiiqadihii ugu dambeeyay, wuxuuna ahaa mashruuc aan aad ugu riyaaqay laakiin ma uusan dhicin.
“Waxaa jirtay marar kale oo aan isku dayay inaan tago laakiin kooxdu may iga ogolaan.
“Waxaan doonayaa inaan ciyaaro kubadda, weli waan awoodaa inaan kubad wacan ciyaaro laakiin kooxda ayaa ogolaanshaha leh – iyaga ayaa i maamula iyaga ayaana heshiiskayga iyo waxa aan kooxda u qabanayaba gacanta ku haya”.
– Ciyaaryahanka kale ee laga yaabo inuu ku sii jeedo Premier League-ga waa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bayern Munich Thiago Alcantara.
Kadib dhawr bilood oo la isla dhexmarayay in 29 jirkan reer Spain ay iibsanayso Liverpool, haddana ESPN ayaa soo sheegtay in sidoo kale Manchester United lagu casuumay inay wadahadalo la gasho kooxda ku guuleysatay Champions League ee Bayern kuwaasoo ku saabsan Thiago.
Waxaa loo maleynayaa in Liverpool aysan weli aqbalin qiimaha kooxda reer Jarmal ay ku qiimaysay inay ku iibinayso Thiago oo ah 27 milyan oo ginni.
– Daily Mailayaa qortay in goolhayaha soo laabtay ee Dean Henderson uu u sheegay Man United inuu mar kale ka tagayo kooxda hadii laga dhigo beddelka David de Gea xilli ciyaareedkan soo socda.
Henderson, oo 23 jir ah, ayaa dhawaan saxiixay heshiis cusub oo shan sanno ah oo uu kusii joogayo Old Trafford ka dib labo sanno oo uu amaah ugu maqnaa kooxda Sheffield United.
Inkastoo uu diyaar u yahay inuu kula tartamo De Gea maaliyada No. 1, haddana goolhayahan hamiga sare leh ayaa ku adkeysanaya inuu doorbidayo amaah kale loo diro halkii uu kursiga keydka fadhiisan lahaa xilli ciyaareedka soo socda.
– Newcastle ayaa umuuqata inay ugu dambeyn guul ka gaadhay baacsigii ay ugu jirtay inay soo iibsato ciyaaryahano cusub.
Sida laga soo xigtay talkSPORT, ciyaaryahankii hore ee Bournemouth Ryan Fraser ayaa ogolaaday inuu si bilaash ah ugu biiro kooxda Steve Bruce ka dib markii uu iska diiday dalab uga yimid Crystal Palace.
– West Brom ayaa raadineysa inay xoojiso kooxdeeda iyadoo si joogta ah ugu dhaqaaqeysa xiddiga West Ham ee Grady Diangana.
The Guardian ayaa sheeganeysa in Diangana oo 22 jir ah uu diirada u saaran yahay tababaraha Baggies Slaven Bilic ka dib markii uu dhameystiray heshiis amaah ah oo uu ku soo qaatay The Hawthorns xilli ciyaareedkii hore.
Heshiiska ayaa lagu soo waramayaa inuu ku kacayo in ka badan 18 milyan oo ginni, taasoo u horseedi doonta Hammers inay u dhaqaaqdo laacibka Brentford Said Benrahma si uu bedel ugu noqdo.
Benrahma, oo 25 jir ah, ayaa loo doortay ciyaaryahanka sannadka ee naadigiisa xilli ciyaareedkii hore laakiin waxaa si weyn loo filayaa inuu ka tago Bees haddii fursad Premier League uu ku iman karaa ay u soo baxdo.
Previous PostDeg Deg: Daawo, Xisbiga Kulmiye Oo U Diiday Siyaasi Maxamed Adan Qabo in uu u tartamo Gudoomiye Ku Xigeenka Xisbiga Next PostJoe Biden Oo Booqday Qoyska Ninkii Madowga Ahaa Ee 7-da Xabadood Lagu Tiriyay